गणतन्त्र स्मारक निर्माण सम्पन्न, छिटै हस्तान्तरण गरिने ! | Seto Khabar
ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : गलत प्रवृत्ति र पात्रहरूका कारण एकीकरण असफल (पूर्णपाठ)
मलेसियामाथि नेपालको शानदार जित, भुर्तेल र शेखको शतकीय साझेदारीमलेसियामाथि नेपालको शानदार जित, भुर्तेल र शेखको शतकीय साझेदारी
लुम्बिनी प्रदेशमा नवनियुक्त ४ मन्त्रीले लिए शपथ
होटल – रेष्टुरेन्ट विहान ८ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने, मास्क नलगाए १० रूपैयाँ जरिवाना
कोरोनाका गम्भीर बिरामी बढे, २४ घण्टामा ८ को मृत्यु, १४८ आइसियूमा, ४३ को भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै
माधव नेपालसहित ८ नेतालाई स्पस्टीकरण सोध्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय
मदनकृष्ण श्रेष्ठ लगायत परिवारका ५ जनालाई कोरोना संक्रमण
गणतन्त्र स्मारक निर्माण सम्पन्न, छिटै हस्तान्तरण गरिने !
२०७४ फागुन १, मंगलबार (३ साल अघि)
काठमाडौँ, फागुन १ । गणतन्त्र स्मारक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । वि.सं २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएपछि सरकारी पहलमा नारायणहिटी दरबार परिसरमा निर्माण थालिएको स्मारकको काम सकिएको हो । सरकारले वि.सं २०६९ मंसिरमा बिकोई स्काई बंगलामुखी ज्वाइन्ट इन्भेन्चरसँग सम्झौता गरी तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने भने पनि निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो ।
कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रोशन श्रेष्ठले स्मारक निर्माणको काम पुरा भएकाले यही महिना भवन विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । “स्मारक निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्ने गरी काम गरेका थियौँ, भूकम्प र भारत सरकारले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले केही समय ढिला गरी सम्पन्न भएको हो”, उनले भने ।
पैँतीस रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको स्मारक शुरुमा रु ३० करोडमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि झण्डै रु ४० करोड खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ । भवन विभागले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा उद्घाटन गर्ने योजना बनाएको श्रेष्ठले बताए । रासस
इन्स्पेक्टर मन्दिप चौहान बने चैत महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी
अब ५ जना भन्दी मानिस सार्वजनिक स्थानमा भेला हुन नपाइने, विवाहमा २५ जना